Maayarkii degmada Xariirad Abokor Xasan Guuleed oo daad qaaday iyo wasiirka ciyaaaha oo dirqi lagu soo badbaadiyey | Baadiye Media Center
Hargeysa (BMC)-Maayarkii degmada Xariira ee Galbeedka Gobalka Awdal Abokor Xasan Guuleed ayuu daad ku qaaday dooxyada u dhexeeya Qol-ujeed iyo Boon,dhanka kale raxmaddaasi ilaahay keenay oo la rumaysan yahay inay wada gaadhay deegaanada Hargeysa ilaa iyo Galbbeedka Awdal waxay galaafatay Maayarkii degmada Xariirad Marxuum Abokor Xasan Guuleed oo ay biyuh ku qaadeen inta u dhaxaysa Boon iyo Qol u jeedd.
marxuumkan dhintay waxaa la socday Wasiirka ciyaaraha Cabdirisaaq Waaberi Rooble iyo askartii ilaalada u ahayd,gaadhigii ay wateen masuuliyiintaasi ayaa ka gudbi waayey baaxaddii biyaha qaaday Maayarka hasa yeeshee waxaa si dirqiya lagu soo badbaadiyey wasiirka Cabdirisaaq waaberi rooble kaasoo ay biyuhu hafiyeen balse nasiib wanaagg laga gaadhay intaanay qaadin.
Roob weyn oo mahigaan ayaa oo aan sanado badan isagoo kale la aragg ayaa shalay galinkii damnbe ilaa xalay saqdii dhexe siduu u bilawday soo gaadhay saaka 7:00 subaxnimo,roobkan oo aanay bulshadu sanado badan isagoo kale indhaha saarin waxa uu Hargeysa iyo nawaaxigeeda ka bilawday shalay saacaddu markay ahayd 2:00 duhurnimo waxaanu da’ayey ilaa xalay fiidkii.
Raxmaddaa ilaahay keenay waxay badashay dareenkii bulshada waxaanay soo celisay niyad samidii iyo farxaddii dadweynaha ay baaruhu wehelka u noqdeen sanado farabadan kuwaasoo dad iyo duunyaba ku waayey masiibadii abaarahaasi keeneen bilihii la soo dhaafay.
iyadoo ay dadku sidaa ugu qabawsadeen roobkii shalay ilaa xalay fiidkii da’ayey ayuu haddana ilaahay SWTC markale maraqa ka furay xalay saqdii dhexe saacaddu markay ahayd abaaro 2:00 habeenimo waxaana markaliya is qabsaday dhibicda roonnka iyo jiingadaha dhakada ka saaran dhismayaasha guryaha taasoo ay dad badani hurdada ka soo boodeen daryaankii is qabsaday ee dhibicda raxmaddaasi.
marnaba roobkaasi muu kala go’in ilaa ay saacaddu ka soo gaadhay 7:00 subaxnimo xiligaasoo ay dadku shaqada si farxadi ku dheehantahay ugu kallaheen iyagoo ay wajiyadooda faraxadi ka muuqanayso,dhanka kale waxay bulshadu ku waabariisatay iyadoo ay waxwaliba maydheen Guryihii,gaadiidkii,dhulkii iyo dhirtiiba isla markaana ay soo noqotay bilicdii dhulka.
baraha bulshada ayaa la soo dhigayaa ilaa hadda muuqaallada kaladuwan ee Raxmaadkaasi keenay sida gaadiidka biyuhu xidheen ee dul sabaynaya iyadoo ay dadka qaarkood isku dayayaan inay xoogg kaga saaraan gawaadhidooda biyaha.